Ekhokelwa Work Light, Wobble Ukukhanya, Led Umsebenzi Lamp, Cob Work Light - Hengjian
Iminyaka eli-12 yamava eMveliso!
I-Ningbo Hengjian Photoelectron Technology Co., Ltd., eyasekwa ngo-2009, ibekwe e-Cixi, e-Ningbo, umenzi omtsha oxhakaxhaka ekuveliseni iimveliso zokukhanya kwe-LED, kubandakanya ukukhanya kwe-LED, ukukhanya komsebenzi we-LED kunye ne-Highbay ye-LED, njl.
U-Hengjian unyanzelisa ukuba ukoneliseka kwabaThengi yeyona njongo yethu iphambili. Iyaqhubeka ngokuvelisa ukukhanya kwezikhukula okutsha okanye iimveliso zokukhanya kwaye zikhokele umkhwa oqinisekileyo.
Siza kukubonelela ngeyona nkonzo intle ukuze sikwazise kakuhle ngeemveliso zethu.
Hengjian ukunyanzelisa ukuphuhlisa ukukhanya kwezikhukula ezintsha okanye imveliso ukukhanya iimveliso kwaye kukhokelela mkhuba smart.
Ngophuhliso lwamashishini, iimveliso ezahlukeneyo kufuneka ziveliswe kwaye zilungiswe. Izibane azinakwahlulwa ukusuka kumgangatho wefektri. Ukuqinisekisa inkqubela phambili yemveliso kwaye ...
Iitekhnoloji ezintsha, izinto ezintsha, kunye neetekhnoloji ezintsha zisetyenzisiwe ngokuqhubekekayo kuyilo lwamandla amakhulu e-LED, zibeka isiseko esiqinileyo sokuyilwa kwezibane ze-LED ezinamandla amakhulu ....
Kulehlobo ligqatsayo, uManyano lwethu lwe-Hengjian Optoelectronics lubonakalise uthando olukhulu kubasebenzi kwaye sabathumela iipopu ezipholileyo. Makhe sijonge ingxelo evela kumgca wangaphambili. O ...